Home » My Dear Diary » . မြ ရဲ့ သင်ပုန်း ၁၆-၀၄-၂၀၁၆
ဒီလောက်တောင် မေတ္တာတရားကြီးကြီး နဲ့ သည်းခံခွင့်လွှတ် ပြီး ရင်ကြားစေ့နေတဲ့ အမျိုးသမီးကြီး ကို
ဆက်ပြီး စော်ကား တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ လုပ်နေသူများ ကို ဘယ့်နှဲ့လုပ်ပြီး ကျေးဇူးတင်လို့ ရပါ့မလဲ ကွယ်။
စေတနာကို စော်ကားနေတာကို မြင်နေတာမို့ ပါးစပ်ပိတ်နေနိုင်ဖို့ ခက်သား ကိုး။
ဒီလောက် စိတ်မပြည့်ဝ သေးလို့ရွာထဲ မောင်ကြွပ် နဲ့ လှည့်ပြီး ရန်ဖြစ်နေတာပေါ့ ဟယ်။
မဟုတ်ရင် ဒီ မောင် ကို ရှောင်နေတော့ မပေါ့။
အဲ့ဒီ အမျိုးသမီးကြီးရဲ့ စာအုပ်တွေ မဖတ်ဖူးသေးဘူး။
စာကြည့်တိုက် နာမည်တပ်ပြီး စာအုပ် မရှိ –
တစ်နေ့ ဖတ်ရမယ် လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ဆက်ဆက်ရယ်။ ဒေါ်ခင်ကြည် ဖောင်ဒေးရှင်း မှာ စာကြည့်တိုက် အတွက် ပညာရှင်တွေ (တစ်ချို့ ဟားဗတ်ဆင်း) အများကြီး ရံ ထားတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်.. ငယ်ငယ်တုံးက ရေးဖူးတဲ့စာတွေများရှိရင် ဖတ်ချင်မိတယ်…။
သူကြီး မင်း ရယ်
တကယ်လို့..နောင်အနှစ်၁၀၀ မှာ.. မြန်မာပြည်သာ ကမ္ဘာ့တနေရာမှ ခန့်ခန့်ထည်ထည်ရှိနေခဲ့ပါရင်.. ဒီခေတ်လူထုဟာ.. အင်္ဂလိပ်ခေတ်.. ကိုလိုနီခေတ်.. ဦးနုခေတ်.. စစ်အာဏာရှင်ခေတ်တွေထဲက.. လူတွေထက်.. မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ထင်ရှားကျန်ရစ်နေတဲ့ သူရဲကောင်းလူထုကြီးပေါ့..။ အားလုံး…။ အားလုံး..။
တဂျီးရေ သူရေးတဲ့စာအုပ်တွေ ဖတ်ရုံလောက်နဲ့ သူ့စိတ်ကိုခန့်မှန်းနိုင်မယ်မထင်
လူတွေက.. အများအားဖြင့် ငယ်ငယ်က.. (လူငယ်..လူရွယ်) အရွယ်က …သူကိုယ်တိုင်.. ရေးထားခဲ့တာတွေက.. သူ့ဘ၀တခုလုံးကိုလွှမ်းမိုးပါတယ်..။
ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် ဘာတွေရေးထားခဲ့တယ်.. အကုန်မဖတ်ရသေးပေမယ့်… သိသလောက်သူလည်း.. သူ့အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ဖေါ်မယ့်လမ်းပေါ်မှာပါပဲ..။
ဟိုး အရင်ခေတ် တွေ က လူတန်းစား အခြေအနေ တွေ သိပ်မကွာတော့ ညှိပြီး ထိန်း (ခြောက်ပြီး ထိန်း) လို့ လွယ်မယ် ထင်ရဲ့ အန်ကယ်ကြီး ရယ်။
Letters from Burma ကတော့ အာတီဒုံ လက်ဆောင်ပေးလို့ ဖတ်ပြီးပါပြီ။
ပြုံးညီမ – တကယ်လား။ ဟင်းဂျီးများဘူး။ ဗိုက်ဝ ပြီးရော။ :-))
ဒါပေမဲ့ သူ့တပည့် ဂေါက်သီးအကြောင်း သူသိပြီးပါလေ။
အရည်အချင်း ရှိသူ သာဖြစ် အလိုလို နေရာ ရလာမှာပါ။
မဟုတ်ဘဲ ငါတို့သာ တတ်သိ ပညာ ရှိ လို့ အဝင် ကို “ကော်ဇောနီ ခင်းပြီး ကြိုစေချင်” ရုံမက အထဲ မှာလဲ “ဆရာကြီးများ သဖွယ်နေချင်” တော့ အဲလို စိတ်ဓာတ် တွေ ကြောင့် တိုင်းပြည် ထူထောင်ရေးမှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ပါတယ်။
အင်မတန်လှတဲ့.. ဂိမ်းပလေး.. ပါပဲ..။
ကိုမိုးသီး သမတဖြစ်မှ အကုန်ဆွဲစိခိုင်းမှာ… လော်ဘီမြပါဝူး.. သူကတေဓံ….
ညီညွတ်တဲ့ လက်သန်းလေးတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုပေ့ါ။
ကကြီးမိုက်၊ ချစ်မမ လာဖတ်ကြတာ ကျေးဇူးပါ။ :-)))